Bungaza okokuzithokozisa ku-Airbnb
Thola imali ngokuholela abantu ezintweni ezenziwayo ozithandayo.
Kungumsebenzi ohamba ngaphesheya kohambo olujwayelekile noma ekilasini, lwakhiwe futhi luholwa yizakhamuzi emhlabeni wonke. Khombisa idolobha lakho, ubuciko, imbangela, noma isiko ngokusingatha okokuzithokozisa.
Yakha umsebenzi, ngendlela yakho
Ukuhamba ngebhayisikili ohambweni lokudla, ukudweba izithombe ebusuku, i-tapas esikebheni, noma i-yoga (enezimbuzi). Dala futhi uhambise abantu abahlukile abafuna ukuzama.
Yenza okuthandayo (bese uyakhokhelwa)
Scout for art art or surf ekushoneni kwelanga, vula isifiso sakho sibe yinzuzo. Thola imali ngaphandle kokuthi uzizwe njengomsebenzi.
Thola amazwi ngenhloso yakho
Qwala ngezinyawo nezinja zokuhlangula, noma ufundise ngemfashini emelela amalungelo wabantu. Qwashisa ngomkhankaso wakho wosizo ngendlela entsha sha.
Bonisa lokho okwaziyo
Okokuzithokozisa kwazo zonke izinhlobo, njengokupheka, imisebenzi yezandla, ukutshuza ngesikebhe nokuningi. Akunamkhawulo kulokho ongakwenza. Hlola lezi zigaba ezifakiwe.
Yabelana ngomlando wezimpawu ezidumile edolobheni lakho.
Ukudla & Iziphuzo
Bungaza uhambo lokudla, ikilasi lokupheka, okokuzithokozisa kokudlela, nokuningi.
Ukuhamba kwemvelo, imidlalo yamanzi, imidlalo yasezintabeni, nokuningi.
Joyina umphakathi okhulayo wabantu abanelukuluku lokwazi
Ababungazi abapheki, abaculi, ama-DJ, nabanye ochwepheshe ezindimeni zabo. Benza abantu abavela emhlabeni wonke bazizwe bexhumene, futhi bafinyelele ezindaweni eziyingqayizivele nemisebenzi engatholakali kwezinye izindawo.
U-DJ Jigüe uzinikele ukwabelana ngothando lwakhe lomculo i-Afro-Cuban. Ezinye zezivakashi azijwayelanise nomlando womculo oyinkimbinkimbi waseCuba zaze zaya ukuyombona edlala e-Austin, e-Texas.
Umhlali wase-Shanghai kanye nombungazi wezokupheka uCici ukholelwa ukuthi ukupheka kungaletha injabulo. Wamukela izivakashi ekhishini lakhe ukuze zifunde ukwenza amadombolo odumo ase-China ngendlela ejabulisayo.
Sizokweseka, indlela yonke
Izinsiza ezifana nezihloko kanye nokuqonda okuzinikezelwe izidingo zakho zokubungaza, amahora angu-24/7 okukusekela nezivakashi zakho, ukuvezwa okokuzithokozisa, nokuningi.
Amathuluzi afanele wena
Ideshibhodi ukukunika ulwazi, impendulo yokuthi ungayithuthukisa kanjani, ukubonakala kuzivakashi ezivela emhlabeni wonke ngokusesha nokuhlunga, izinkokhelo ezingenayo, nokuningi okuningi.
Ikhava yomshuwalense engaze ifike ku-$ 1 miliyoni wemisebenzi eminingi
Ngokokuzithokozisa okuningi, uzothola umshuwalense ongaze ufike ku-$1 million. Ngaphezu kwalokho, uzothola usizo lwamakhasimende 24/7 ukuze ugxile ekuphishekeleni okuthandayo Funda kabanzi
Isiqondiso sokukusiza ukhule
Ama-newsletters eviki onke, ama-athikili, nezinsiza zinikezelwa ukukusiza uphumelele ohambweni lwakho.
Nakhu ukubuka okusheshayo kwenqubo, kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni.
Funda amazinga ethu ekhwalithi
Qiniseka ukuthi okokuzithokozisa kwakho kuhlangabezana nebha yethu yobuchwepheshe, ukufinyelela kwangaphakathi, nokuxhumeka.
Yenza ikhasi lokokuzithokozisa
Ikhasi lakho liwukuthi abantu bakuthola kanjani. Yenza umbono omkhulu wokuqala ngokugqamisa ubuchwepheshe bakho futhi wandise izithombe ezisezingeni eliphezulu.
Qala ukubungaza okokuzithokozisa kwakho
Uma nje okokuzithokozisa kwakho kuhlangabezana nezindinganiso, usulungele ukwengeza izinsuku bese uqala ukubungaza.
Ingabe kufanele ngibungaze ikhaya ukuze ngibungaze okokuzithokozisa?
Cha. Akudingeki ukuba ubungaze izivakashi ubusuku obubodwa ekhaya kwakho noma endaweni yakho ukuze ube umbungazi wokuzithokozisa.
Kuyini ukuzibophezela kwesikhathi?
Ungabungaza kaningi kangangokuthanda kwakho—zizwe ukhululekile ukulungisa izinsuku zakho nezikhathi uze uthole ukuthi yini ehambelana kahle nawe.
Ingabe ngidinga ilayisensi yebhizinisi?
Kuye ngemisebenzi ebandakanyekayo, okokuzithokozisa okuthile kungadinga ilayisense yebhizinisi. Qinisekisa ukuthi uhlola imithetho yendawo yangakini ukuze uthole ukuthi yimaphi amalayisensi angase adingeke kokokuzithokozisa kwakho, ikakhulu uma kukhona ukudla, utshwala noma kubandakanyeka izithuthi. Funda kabanzi